Radio Madhya Paschim बाँसुरीको धुनमा चलेको जीन्दगीे/ बाँसुरी बजाउँदै जीवन चलाउँदै : बाँसुरी कान्छा
जीत सागर जी.एम.
बाँसुरीले जीवन चलाको छु , बाँसुरी बजाउने कलाले मलाई बाँच्न सजिलो बनाएको छ, यि सबै भनाई बाँसुरी कान्छाको हो । करिब ५ दशक अघि बाँसुरी बजाउन शुरु गरेका बाँसुरी कान्छाको बाँसुरीको धुन सुन्दा आँखा नरसाउने मानिस सायद कमैै भेटिएलान् ।
उमेरले ५९ वर्ष पार गरिसकेका बाँसुरी कान्छाको बाँसुरी बजाउने मोह अझै पनि उस्त देख्दा लाग्छ संगितले मानिसलाई आन्नद दिने मात्र होइन बाँच्न पनि सिकाउँछ । बाँसुरी बजाउँदै बालपन र जवानी पार गरेर बुढेसकालमा प्रवेश गरेका बाँसुरी कान्छाको बाँसुरी अहिले पनि जीवनको सहारा बनेको छ । वास्तविक नाम अर्कै भएपनि बाँसुरी कान्छाको नामबाट परिचीत उनले गाँउमा सबैले मलाई यहि नाम भनेर चिन्ने गरेको बताए ।
वि.स. २०१६ सालमा जन्मेका घोराही उपमहानगरपालिका–५ धर्ना भैसापत्रका झुपलाल नेपाली बाँसुरी कान्छाको रुपमा परिचत छन् ।मानिस केहि न केहि कला बोकेर जन्मेको हुन्छ ,अनि उसमा भएको कलाले नै जीवन जीउने आधार बनाइरहेको हुन्छ , फरक यति मात्र हो आफु भित्र भएको कलालाई कोहीले दुनियाँ सामु चित्रित गराउँछन् त कोही आफैँमा सिमित रहन्छन् ।
हो बाँसुरी कान्छाको यस्तै कथा छ । कला र प्रतिभा हुँदाहुँदै पनि बाँसुरी कान्छा न आफै अघि बढ्न सक्नु भयो न त राज्यले नै उहाँलाई चिनाउन सहयोग ग¥यो । उमेरले करिब ६ दशक लाग्दै गर्नुभएका नेपाली बाँसुरी कान्छाको जीबन कथा निकै संघर्षपूर्ण र सिर्जनात्मक छ ।
उनि भन्छन– मैले बाँसुरी बजाउने प्रतिभा राष्ट्रसामु पु¥याउन नसकेपनि मलाइ जीबन जीउन सहयोग गरेको छ ।’ बाँसुरी.....बाँसुरीले जीवन चलाउन सहयोग गरेको छ, बाँसुरी बजाउँदा बजाउँदै विवाह भयो । अझै पनि बाँच्नकै लागि छोराछोरीको सहारा लिनुपरेको छैन् । विवाह, पुजा–पाठ तथा भजनकृतनमा बाँसुरीको महत्व हुने हुनाले मैले त्यस्तै ठाँउमा गएर बाँसुरी बजाएर जीवन चलाईरहेको छु उनले भने ।
यि सबै कुरा भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ तपाईलाई तर यो सत्य हो । घोराही उपमहानगरपालिका–५ धर्ना भैसापत्रका ५९ वार्षिया झुपलाल नेपाली बाँसुरी कान्छा बाँसुरी बजाएरै करिब ५ दशक पुरा गरेका छन् । मैले लेखेका सबै यि कुरा हेर्नका लागि उनलाई भगवानले ठगिसकेका त छन् तर आज मैले उनको बारेमा केहि नलेखि बस्नै सकिन् ।
बाँसुरीले बाँच्न सिकाएको झुपलाललाई गाँउमा सबैले बाँसुरी कान्छा भनेर चिन्छन् । बाँसुरी धुन संगै आफ्नो मनको भारीलाई हलुका बनाउँदै उनले करिब ६ दशक पार गर्दैछन् ।
५९ वर्ष पुरा गरेका झुपलालले ५ वर्षको उमेरबाटै बाँसुरी बजाउन शुरु गरेका थिए । बाँसुरी कान्छाका लागि संसार हेर्न बाहिरी दृष्टी समयले ठगेपनि मनको दृष्टिबाटै उज्यालो संसार चिह्याउन सफल भएका छन ्।
बाँसुरी कान्छा झुपलाल दृष्टीबिहीन बाँसुरी कान्छाले जीबन जीउनकै एक छाक खान अरुको सहारा लिनुपरेको छैन् । बाँसुरी कान्छालाई बाँसुरीले एक छाक खान र एक सरो लगाउन सहयोग त गरेको छ तर एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा जान अरुको सहारा लिनुपरेको छ ।
पुजा पाठ होस अथवा बिहे ब्रतवन्धमा बाँसुरी बजाउँदै जीवन चलाउनुभएका बाँसुरी कान्छाले बाँसुरीकै कारण बिहेको लगन जुराएको थियो । ३ छोरा र ४ छोरीका बुवा बाँसुरी कान्छाले भने– अवसर पाएको भए कलाकार बन्थेँ तर तैपनि कुनै पछुतो छैन् । उनि भन्छन् र्– बाँसुरी बजाउँछु कसैले पाँच सय, कसैले एक हजार दिन्छन् , कसैले २ हजार दिन्छन् त्यसैले खान, लाउन तथा फोन खर्च पुगेको छ ।’
बाँसुरी कान्छाको प्रस्तुती अथवा बाँसुरीको धुन सुन्नका लागि टाढाबाट मानिसहरु पनि आउने गरेको उनका परिवारले बताएका छन् । बाँसुरी बजाउनकै लागि रोल्पा सम्म पुग्ने गरेको बताँउदै बाँसुरी कान्छा झुपलालले दाङका सबै ठाँउमा पुगिसकेको बताए ।
उनि भन्छन् र्– अहिले भन्दा पहिले अलि बढी माग हुने गरेकाले अलि धेरै पैसा कमाईन्थ्यो पहिलेको तुलनामा अहिले अलि कम पैसा कमाउने गरेको छु तैपनि पुगेकै छ ।’ बाँसुरी बजाउँदै गर्दा बुढी संग मायाँ बसेको हो, बाँसुरी बजाउँदै बुढी फकाए अनि बिहे पनि भयो ’– उनले बताए ।
बाँसुरीको सहारामा जीवन चलाउँदै गर्नुभएका झुपलालको राज्यसंग खासै केहि गुणासो केहि नभएपनि एउटै इच्छा छ । खानेपानी र नुहाउने पानी राज्यले व्यवस्था गरिदिनु पर्छ उनि भन्छन् ।
बाँसुरी कान्छालाई राज्य संग अरु केहि गुणासो छैन् तर उनको एउटै इच्छा छ खानेपानीको धारा घरको आँगनसम्म आउनुपर्छ जसले गर्दा आफुलाई सहयोग पुग्ने थियो अहिले पानी ल्याउनको लागि दैनिक २०÷३० रुपैँया दैनिक खर्चनुपरेको उहाँको भनाई छ । मेरो घर आँगनमा राज्यले सक्छ भने धारको व्यवस्था गरोस यहि छ मेरो इच्छा उनले भने । बाँसुरी कान्छाले बाँसुरी बजाउने मात्र नभई मादल बजाउने गित गाउने गरेका छन् ।